Ukuyila imephu yedijithali yendlela ejonge amashishini ajonga phambili | Martech Zone
Ukwenza iMephu yendlela yedijithali yokuShishino oluJonga phambili
NgoMgqibelo, Oktobha 24, 2020 NgoMgqibelo, Oktobha 24, 2020 Tim Duncan
Ukusukela oko kwabakho ubhubhane, sabona inguquko kwidijithali, notshintsho ukuya kwimisebenzi ekude kunye nokufikelela ngakumbi kwidijithali kwiinkonzo kunangaphambili - imeko enokuthi iqhubeke nasemva kobhubhane. Ngoku ka IMcKinsey kunye neNkampani, Satsiba iminyaka emihlanu phambili sokwamkelwa komthengi nakwishishini ledijithali kumcimbi weeveki ezimbalwa. Engaphezulu kwe Iipesenti ezingama-90 zabaphathi zilindele ukuwa kwi-COVID-19 ukutshintsha ngokusisiseko indlela abenza ngayo ishishini kule minyaka mihlanu izayo, phantse uninzi lokuqaqambisa ubhubhane luya kuba nefuthe elihlala lihleli kwindlela yokuziphatha kwabathengi kunye neemfuno zabo. Ewe kunjalo, iipesenti ezingama-75 zabathengi abamkele idijithali okokuqala ukusukela kwisicwangciso sobhubhane sokuqhubeka emva kwe-COVID-19. Bajoyina umkhosi okhulayo we Abaxhasi abaxhunyiwe, Abasebenzisana kuphela neempawu ngokusebenzisa amajelo edijithali njengewebhusayithi kunye neeapps.
Abaxhasi abaxhunyiwe, bajikeleza sonke isizukulwane, zii-hyperaware zamava e-brand ngokubanzi kwaye sele bekhulile beqhelene neenkonzo eziphezulu ze-Intanethi. Aba bathengi bathelekisa amava amabi kunye namabi, hayi okhuphisana ngqo neemveliso kunye neenkonzo. Baza kugweba amava e-Uber kunye neAmazon, kwaye awona mava amnandi aya kuba lolona lindelo lwabo lusezantsi. Uxinzelelo luyaqhubeka nokunyuka kwiinkampani ukuba zihlawule ingqalelo kwiimpawu zangaphandle kwendawo yazo kwaye zihambisane neendlela ezintsha. Ingxelo ye-HBR ikhankanya esona sizathu sokuqala ngaphezulu kwesiqingatha (iipesenti ezingama-52) ze-Fortune 500 zanyamalala ukusukela ngonyaka ka-2000 kukusilela kwabo ekufezekiseni utshintsho lwedijithali. Ukuqinisekisa ukuba amajelo edijithali ahamba kunye, okanye angcono kunalawo, abo bakhuphisana nabo ngokuthe ngqo nangokungathanga ngqo baya kuba ngundoqo kuhlumo oluzinzileyo.
Ukuphucula uhambo lwabaThengi
Indawo yanamhlanje enxibelelene ne-hyper, edityaniswa nefuthe lobhubhane, ikhawulezisile ulindelo lwabathengi kwindima edlalwa yidijithali kumava ophawu lomzimba. Kwiinkampani ezininzi, uhambo lwabathengi olukwi-Intanethi luhlala luphukile kwaye luphelelwe lixesha, njengoko kuye kwaba ngumceli mngeni kubathengi ukuba babe namava aqinisekileyo xa bezibandakanya nophawu lwedijithali.
I-COVID-19 ikwaveze amanye amanqaku eentlungu zabathengi angachazwanga eyidijithali enokukunceda ukusombulula. Izinto zohambo lwabathengi ezibangele ukuphazamiseka kwangaphambi kobhubhane, njengokulinda emgceni kunye neentlawulo, ngoku kufuneka zenziwe zingenakunxibelelana kwaye zikhuseleke ngokusemandleni, zibize ungenelelo lwedijithali. Ibha yokugqwesa ngoku inyuke kakhulu; Utshintsho lwexesha elide kulindelo lwabathengi kunxibelelwano olunqongopheleyo lwabasebenzi luya kuqhubeka.
Ukuze umbutho uqale utshintsho kwikamva labo ledijithali, kunyanzelekile ukuba uhambe ngesantya kunye nenjongo, kwaye ususe ii-silos. Ukuthengisa ngebrand, amava abathengi, ukunyaniseka kunye nokusebenza kufuneka konke kudibanise ukuxhasa iinjongo ezifanayo. Ukulungisa uhambo lomthengi olaphukileyo kunye nokufezekisa iinjongo zokukhula, wonke umntu entlanganweni kufuneka abumbane ajikeleze umbono oqhelekileyo wedijithali. Lo mbono kufuneka ke uguqulwe ube sisenzo ngokuphuhlisa iinkqubo zedijithali- endaweni yeeprojekthi zedijithali- kugxilwe okungapheliyo kumthengi. Imibutho esindwa yimisebenzi yexesha elifutshane kunye namaqela athunyelweyo aya kudala amava abathengi angakhuthaziyo kwaye ashiye amathuba okukhula abalulekileyo etafileni. Kwelinye icala, isenzo kumbono oqhelekileyo wokugqwesa kwidijithali kuya kunika imbuyekezo ethembisayo. Iya kuba ziinkampani ezinamaqela adityanisiweyo- zisebenzisa, zifunde, kwaye zisebenze kulwazi lwedatha- eziza kuba nakho ukuhamba ngokukhawuleza nangobungqina bexesha elizayo.
Umbutho ungawuqonda njani umbono wedijithali?
Ngombono wexesha elide engqondweni, ukucacisa ubuchule, ubungakanani bokukhula kobubanzi benkampani kubaluleke kakhulu. Oku kunyanzelekileyo kunokuhambelana nokwahlulahlula, ixabiso, umgangatho, okanye inqanaba lokudlala elinokhuphiswano, kwaye kufuneka linamathele kumbono wedijithali wenkampani.
Ngelixa lithe ngqo kuhambo lwenkampani nganye kunye nenqanaba langoku lokuvuthwa kwedijithali, nantsi imigaqo ebalulekileyo onke amashishini ekufuneka ethathele ingqalelo ukuba alungele ngokwamanani okuqhelekileyo:
Izinto ezilula, ezingalibalekiyo, namava alungelelanisiweyo -Vumela abathengi ukuba benze ngokukhawuleza nangokulula oko bafuna ukukwenza
Ukunyanzeliswa komntu xa kunokwenzeka Sebenzisa itekhnoloji ukusebenzela iimfuno zabathengi
Khuthaza ukuhamba rhoqo kunye nokuqhuba ukuthembeka Sebenzisa amandla edatha ukuqonda indlela yokuziphatha kunye nokukhuthaza amanyathelo
Ukudibanisa iitekhnoloji ezikhoyo kunye nokusebenzisa amandla abo ngokudibeneyo -Ukuphela kwendlela yokukhula kwesilinganiselo kukucwangciswa kakuhle kunye nokuqina kwetekhnoloji
Yahlula iisilos -Fumana iindlela zokusebenzisana ngabom kulunge ngakumbi
Ingcebiso ebaluleke kakhulu kulo naliphi na ishishini elinokuthatha kule meko yemozulu kukucwangcisela ingomso, hayi namhlanje. Lonke uphawu kufuneka luzabalazele ukugcina nokulungisa imephu yedijithali epheleleyo ukuqhuba uzinzo kunye nokukhula kwengeniso. Ukuba ingxaki isifundise nantoni na, kukuba akukho xesha lingcono lokucwangcisa nokwenza izinto kwihlabathi elandayo ledigital.
tags: utshintshoabathengi abaxhunyiwei-covid-19imephu yendlela yedijithaliumbono wedijithali
UTim Duncan sisiKhokelo sokuziQhelanisa nokukhula kweMveliso kwiBhotile yeRocket, egxile ekuncedeni iimveliso zonyuse amanyathelo exabiso kumava abo kubathengi ngokwenziwa kokufunyanwa, ukuguqulwa, ukubandakanyeka kunye nokugcinwa kweemetrikhi. Phambi kweBhotile Rocket, uTim wasebenza e-IBM njengoMcebisi woLawulo lweNkqubo yoShishino, kwaye waphumelela kwiDyunivesithi yase-Oklahoma enesidanga sobunjineli boLuntu.
Ukutyunjwa: Yonke into e-Inye yokuCwangciswa kwe-Intanethi kwiShishini lakho
Sebenzisa iiFomathi zeWordPress kunye neGravity ukuFaka iiNkokeli